မိတ်ကပ်စလိမ်းမယ့် ချစ်တို့မှာ ဒီလို ပစ္စည်းတွေရှိပြီလား? | CosmeticMyanmar
Home » Article » မိတ်ကပ်စလိမ်းမယ့် ချစ်တို့မှာ ဒီလို ပစ္စည်းတွေရှိပြီလား?
မိတ်ကပ်စလိမ်းမယ့် ချစ်တို့မှာ ဒီလို ပစ္စည်းတွေရှိပြီလား?
မိတ်ကပ်ဆိုတာကတော့ ကိုယ့်ရဲ့ ငုပ်လျှိုးနေတဲ့ အလှကို ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ စွမ်းအင်တစ်မျိုးပါ။ ခုနောက်ပိုင်း မီဒီယာတွေမှာလည်း before & after မိတ်ကပ်တွေ ပြင်ဆင်ပုံကိုတွေ့ဖူးကြမှာပေါ့နော်။ ဒီတော့ make up လေးလဲ စလိမ်းချင်တယ် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းကိုဘာတွေဝယ်ရမလဲ မသိတဲ့အချစ်တို့အတွက် admin က မိတ်ကပ်လိမ်းတဲ့အခါ လိုအပ်တဲ့အရာလေးတွေကို လက်တို့လိုက်တယ်နော်။
၁. အောက်ခံမိတ်ကပ် လို့ခေါ်တဲ့ foundation ကိုရွေးပါ။
ပထမဆုံးအနေနဲ့ မိတ်ကပ်စလိမ်းမယ့်ပျိုမေတို့က foundation ရွေးချယ်တဲ့အခါ ကိုယ်က မိတ်ကပ်သားများတာကြိုက်တာလား? နည်းတာ ကြိုက်တဲ့သူလားဆိုတာ သိဖို့လိုပါတယ်။ မိတ်ကပ်သားများတာနည်းတယ်ဆိုတာက ကိုရီးယားမလေးတွေလို ကြည်ကြည်ပြောင်ပြောင်လေးဖြစ်ချင်တာလား? အနောက်တိုင်းက မင်းသမီးတွေလိုညိုစိမ့်စိမ့်ဖြစ်ချင်တာလား? ပြီးတော့ မိတ်ကပ်စလိမ်းမယ့် ချစ်တို့က foundation ထူထူကြီးတွေကိုမရွေးချယ်တာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ BB cream, CC cream စတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကို အရင် လိမ်းချယ်ကြည့်ပါ။ သူတို့က foundation လောက်မိတ်ကပ်သားမပါလို့ နေ့စဉ်လဲအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Foundation ပဲ လိမ်းချင်တဲ့ ချစ်တို့ကလည်း ဝယ်ယူတဲ့အခါ အရောင်ကို သေချာရွေးယူပါ။ ပါးရိုးနဲ့လည်ပင်းနားက နေရာလောက်မှာ စမ်းလိမ်းကြည့်ပြီး မိမိအသားရောင်နဲ့ တစ်ထပ်တည်း ဖြစ်တာကို ဝယ်ယူပါ။ လက်ခုံပေါ်မှာ အရောင်ကို မစမ်းပါနဲ့။ Foundation လိမ်းရင် sponge ဒါမှမဟုတ် brush နဲ့လိမ်းပါ။ လက်နဲ့လိမ်းလိုက်ရင် မညီဘဲကွက်တာတွေ ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။
၂. ပေါင်ဒါ or two way ကို ဘယ်လိုရွေးမလဲ?
မိတ်ကပ်လိမ်းပြီးသွားရင် ပေါင်ဒါလေးကို ပုတ်ပေးပါ။ ဒီအဆင့်မှစဉ်းစားရပါမယ်။ ကိုယ်က foundation ထူထူကြီးလိမ်းထားပြီး powder ကို အများကြီး ထပ်ရိုက်ရင် မျက်နှာက ဖုံဖုံကြီးဖြစ်သွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလိမ်းရမလဲဆိုတော့ အဆီပြန်တတ်တဲ့ နေရာတွေ ဉပမာ- နဖူး, မျက်လုံးအောက်, မေးစေ့လိုနေရာတွေကို တစ်ချက်နှစ်ချက်လောက် ပုတ်ပေးလိုက်တာနဲ့ အဆင်ပြေပါတယ်။ ကဲ လာပြီ မိတ်ကပ်က အသားရောင်နဲ့တူတာကို ရွေးထားရင် ပေါင်ဒါအရောင်ကို တစ်ဆင့်လောက်လင်းတာကိုရွေးပေးလိုက်ပါ။
ဒါကတော့ အခက်ဆုံးလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ မိမိရဲ့ ပင်ကိုယ်မျက်ခုံးမွှေးကို ပုံသွင်းထားပါ။ ပြီးတော့ beginners တွေအတွက်ဆို ခဲတံလိုအမျိုးအစားက ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ အရေးကြီးဆုံး tip ကတော့ မိမိရဲ့ဆံပင်အရောင်နဲ့ မျက်ခုံးမွှေးအရောင် ကိုသိပ်မကွာပါစေနဲ့။ အဲ့နှစ်ခုက အရမ်း ကွာနေရင်ကြည့်ရဆိုးစေပါတယ်။
၄. နေ့စဉ်သုံးနိုင်မယ့် Eyeshadow platte တစ်ခု ပါ
Eyeshadow ကတော့ မိန်းကလေးတိုင်း လိမ်းခြယ်တတ်ချင်တဲ့ အပိုင်းဆိုလည်းမမှားပါဘူး။ အခုမှစလိမ်းမယ့် သူတွေအတွက်က အရောင်ကွက်တွေအများကြီးပါတဲ့ make up artists တွေသုံးတဲ့ ဟာမျိုးတွေကို ဝယ်စရာမလိုပါဘူး။ နေ့တိုင်းသုံးလို့ရမယ့်အရောင်လေးတွေ ဉပမာ- အသားရောင်, အုတ်ကျိုးရောင်, အလက်ကလေးတွေပါတဲ့ဟာလေးတွေကို ရွေးချယ်ပါ။ beginners တွေအတွက်က eyeshadow ကို အရောင်တွေ စုံအောင်ခြယ်သစရာမလိုပါဘူး။ တစ်ရောင်တည်းကိုပဲ ခပ်ပါးပါးလေးခြယ်လိုက်ရင် သဘာဝကျကျလေးနဲ့ လှနေမှာပါ။
လှပရွှန်းစိုတဲ့ မျက်ဝန်းလေးကိုဖန်တီးနိုင်တာ မျက်တောင်ကော့ဆေးပါ။ မျက်တောင်ကော့ဆေးမှာလည်း ထူချင်တာလား? တစ်ပင်ချင်းစီ ကော့ချင်တာလား? မိမိလိုချင်တာတဲ့ အမျိုးအစားကို စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။ Waterproof လို့ပြောထားတာတွေက ဖျက်ရခက်ပါတယ်။ Smudge proof ဆိုတာတွေကတော့ ပြန့်ခြင်း ပျက်ခြင်းမရှိပါဘူး။
၆. ပါးနီကလည်း မပါမဖြစ်ပါ။
ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အသွင်အပြင်ကို ဖန်ဆင်းပေးတာ ပါးနီလေးတွေပါ။ ပါးနီကိုလည်း ပန်းရောင်သန်းတာလေးတွေ၊ မိတ်ကပ်ရောင်လေးတွေက ဘယ်လို look မျိုးကိုမဆို လိုက်ဖက်မှုရှိစေပါတယ်။ ပေါင်ဒါအမျိုးအစားလေးတွေက ခုမှစလိမ်းမယ့်သူတွေအတွက် ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
မိန်းကလေးတိုင်းရဲ့ ဘယ်တော့မှမပြည့်တဲ့ လိုချင်မှုဆိုလဲမမှားပါဘူး။ အသစ်တွေတွေ့တိုင်းဝယ်တတ်တဲ့ admin လိုမျိုးဆို ပိုဆိုးသေး။ နှုတ်ခမ်းနီမှာလည်း gloss လေးတွေ, matte အမျိုးအစားတွေ, creamy type လေးတွေစတဲ့ အမျိုးအစားအများကြီး ရှိပါတယ်။ ပြီးတော့ ကိုရီးယားမလေးတွေလို အတွင်းသားလေးကိုရဲအောင် ဆိုးလို့ရတဲ့ tint လေးတွေလည်းရှိလို့ ကြိုက်နှစ်သက်ရာကို ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။
၈. နောက်ဆုံးအနေနဲ့ အရေးကြီးဆုံးကတော့ မိတ်ကပ်တွေလိမ်းတတ်နေပြီဆိုရင်တော့ မိတ်ကပ်ဖျက်တတ်အောင်ပါလုပ်ထားရမယ်နော်။ မိတ်ကပ် remover မှာလည်း အရည်အမျိုးအစား, cream , lotion ပုံစံဆိုပြီး စျေးကွက်မှာမျိုးစုံရှိပါတယ်။ ဒီလောက်ဆိုရင် မိတ်ကပ်ပစ္စည်းတွေကို ရွေးချယ်တတ်လောက်ပြီထင်ပါတယ်။ ပျိုမေတို့ ဒီထက်ပိုလှစေချင်တဲ့ စေတနာနဲ့ တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
အော်… cosmeticmyanmar page လေးကို like လုပ်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်။ 😉😉
Glitter Me Lip Gloss (Limited Edition)